၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (3 of 5) – Dhamma Training Center
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (3 of 5) zawgyi
(က-၁) ပုရေ=ရှေးဦးစွာ၊ ဇာတ=ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပစ္စယ=အကြောင်းတရား။ ရှေးဦးကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်းတရား။ Prenascence – condition တနည်း Born earlier.
(က-၂) အကြောင်းတရားများက အကျိုးတရားမဖြစ်ပေါ်ခင် ရှေ့ကဖြစ်နှင့်သည့် ပုရေဇာတပစ္စည်း။ (ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော် ပုရေဇာတ နှာ-၁၄၉၊ ပဥှာဝါရ နှာ-၇၇ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။)
Prenascence – condition တနည်း Born earlier.
(က-၃) အကျိုးတရားက အကြောင်းတရားမဖြစ်ခင် ရှေ့ကဖြစ်နှင့်သည့် ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်း။ (ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော် ပုရေဇာတ နှာ-၁၅၂၊ ပဥှာဝါရ နှာ-၈၁ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။)
(က-၄) အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရား ပြိုင်တူဖြစ်သည့် သဟဇာတပစ္စည်း။ (ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော် ပုရေဇာတ နှာ-၁၄၂၊ ပဥှာဝါရ နှာ-၃၀ကိုလည်း ကြည့်ပါ။)
Conascence- condition တနည်း Born together.
(က-၅) ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် ၁-၀တ္ထုပုရေဇာတနှင့် ၂-အာရမ္မဏပုရေဇာတဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
(က-၆) ၀တ္ထုပုရေဇာတကို လေ့လာရာတွင် ၁-စက္ခုဝတ္ထု၊ ၂-သောတ၀တ္ထု၊ ၃-ဃာန၀တ္ထု၊ ၄-ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ၅-ကာယ၀တ္ထု၊ ၆-ဟဒယ၀တ္ထုတို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားမိရန် လိုပေသည်။ (ပစ္စယနိဒေသပါဠိတော် ပုရေဇာတ နှာ-၁၄၉ လည်းကြည့်ပါ)
(က-၇) အာရမ္မဏပုရေဇာတကို လေ့ရာတွင် ၁-ရူပါရုံ အဆင်း၊ ၂-သဒ္ဒါရုံ အသံ၊ ၃-ဂန္ဓာရုံ အနံ့၊ ၄-ရသာရုံ အရသာ၊ ၅-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ အထိအတွေ့တို့ကို ဦးစွာ မှတ်သားမိရန် လိုပေသည်။ (ပစ္စယနိဒ္ဒေသပါဠိတော် ပုရေဇာတကိုလည်းကြည့်ပါ)
(က-၈) မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန် တည်ရာမှီရာ (Base) အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ၀တ္ထု ပုရေဇာတ။ မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန် အာရုံ (Object) အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို အာရမ္မဏပုရေဇာတ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် နား၊ နှာခေါင်း၌ ကြားသိစိတ် နံသိစိတ်တို့ကိုလည်း အလားတူ နားလည်ရပါမည်။
(ခ-၁) ဤတွင် ၀တ္ထုပုရေဇာတပစ္စည်း၏ ထူးခြားချက်မှာ တည်ရာမှီရာ Base က Born earlier ကြိုတင်ဖြစ်နှင့်ပြီး ကျေးဇူးပြုသည် (၀ါ) ဖြစ်စေသည်။ ဥပမာ- အဆင်းကိုမြင်ရန် စက္ခုဝတ္ထုကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရသည်။ အသံကို ကြားရန် သောတ၀တ္ထုကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရသည်။
( ခ-၂ ) ပဥှာဝါရ၌ ရူပါယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယောဟုလည်းကောင်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော်၌ “စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ ဓမ္မာနံ ပုရေဇာတ-ပစ္စယေန ပစ္စယော”ဟု လာရှိပါသည်။ စက္ခုပသာဒ (၀ါ) စက္ခုဝတ္ထုသည် စက္ခု ၀ိညာဏဓာတ် (မြင်သိစိတ်)ကို ပုရေဇာတပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
(ခ-၃ ) မျက်စိအကြည် စက္ခုပသာဒ (၀ါ) စက္ခုဝတ္ထုသည် ရုပ်သက်၊ နာမ်သက်များ၏ သဘာဝနိယာမအတိုင်း ဥပါဒ်၊ ဋ္ဌီ၊ ဘင် Process ထဲမှ ဖြစ် တည် ပျက်၍၊ ဖြစ် တည် ပျက်၍ သွားနေပါသည်။ ဤတွင် Born earlier တင်ကြို၍ ဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုရာ၌ မိမိတို့သိမှတ်နိုင်သည့် အချိန်ကာလအားဖြင့် နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ နာရီ မည်မျှ တင်ကြို ဖြစ်ရသနည်း ဟူသောမေးခွန်း ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။
(ဂ-၁) Everything change, Nothing remain without change. ဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအတိုင်း မြစ်ရေများ မနားတမ်း တစ်သွင်သွင် စီးဆင်းနေသကဲ့သို့ ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မအစဉ်သည်လည်း မနားတမ်း ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲ ၍ နေပါသည်။
(ဂ-၂) ဤမျှ သက်တမ်းတိုတောင်းသော ရုပ်တရားများထဲမှ မည်သည့် စက္ခုဝတ္ထု= စက္ခုပသာဒရုပ်က မြင်သိစိတ်ကို ရှေ့မှ ကြိုတင်ဖြစ်ကာ ကျေးဇူးပြုမည်နည်း။
(ဂ-၃) သေက္ချတောင်ဆရာတော်ဦးတိလောက ပြုစုတော်မူခဲ့သည့် ကျမ်းစာအုပ်တွင် ရုပ်ကလာပ်များ ဖြစ်တည် နေမှုကို အလွန်တိကျစွာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ “အခြေခံရုပ်ကလာပ်ကို ပရမတ္တရုပ်ကလာပ်”ဟု မှတ်ကြ၊ ပရမတ်ရုပ် ကလာပ်မည်သည်ကား တစ်ပါးကိုတစ်ပါး မမှီတွယ်ရဘဲ မဖြစ်နိုင်ကြ၊ မတည်နိုင်ကြ၊ ထိုသို့ မဖြစ်နိုင်၊ မတည်နိုင်ကြသောကြောင့် ဘယ်ရုပ်က အောက်က၊ ဘယ်ရုပ်က အထက်က၊ ဘယ်ရုပ်က လက်ဝဲ၊ ဘယ်ရုပ်ကလက်ယာ၊ ဘယ်ရုပ်က အတွင်း၊ ဘယ်ရုပ်က အပြင်ကဟု ရွေးချယ်မရဘဲ တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေကြ၏။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုစီကွဲသွားအောင် ခွဲခြား၍မရသော အ၀ိနိဗ္ဘောဂရုပ်များအဖြစ် စုစည်း နေကြ၏။ ထိုရုပ်များသည် သဟဇာတသဘောဖြင့် အကုန်လုံး အတူတကွ တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာ၍ ပျက်လျှင်လည်း အကုန်လုံး အတူတကွ တပြိုင်တည်း ပျက်ကြလေ၏။ မြေဓာတ်လွန်ကဲသော ပရမတ္တ ရုပ်ကလာပ်ပေါင်း သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေလောက် သမူဟကလာပ်များ ပေါင်းစုဖွဲ့ကြလျှင် ပရမာဏုမြူ ဖြစ်လာ ၏။ ထိုပရမာဏုမြူ၏ အထည်ပမာဏ အရွယ်အစားကို ဤသို့သိရမည်”
(ဂ-၄) “ဦးခေါင်းက သန်းတစ်ကောင်ကို ခုနှစ်စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်စာသည် လိက္ခာမည်သော ပိုးတစ် ကောင်နှင့် ညီမျှသည်” (ထိုလိက္ခာပိုးသည် ၀ဲနာ၊ ယားနာ ဖြစ်စေသောပိုးဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ဆေးသိပ္ပံက အတည်ပြုကြပါသည်။)
“အနုမြူ Atom တစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် ပရမာဏုမြူ Partical တစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အဘိဓမ္မာတရားတော်အရ အနုမြူ ဗအသာ တစ်လုံးတွင် ပရမာဏုမြူ Partical ၃၆-မျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း နားလည်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ-၅) ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များကရုပ် Matter ကို အထပ်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ လေ့လာသောအခါရုပ်၌ အနှစ် အဆံ တစ်စုံတစ်ရာမှ မတွေ့ရှိတော့ဘဲ စွမ်းအင် Energy အဖြစ်သာ ရှိကြောင်း ဖော်ပြကြပါသည်။ ထိုစွမ်းအင် Energy မျှသာရှိသော သဘောတရားတွင် ရုပ်တစ်ခု၌ ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် Weight အလေးချိန်၊ Mass ဒြပ်ထု သဘော၊ Form အဆင်းသဏ္ဍာန်၊ Dimension အရွယ်အစားပမာဏတို့ မရှိကြောင်းကို ယနေ့ ရူပဗေဒ သိပ္ပံပညာရှင်များက တွေ့ရှိလာပါသည်။
(ဂ-၆) ဤတွေ့ရှိချက်က ရုပ်တွင် ထာဝရတည်မြဲသည့် အထည်ဒြပ်မရှိတော့ကြောင်း သက်သေထူပါသည်။ မြတ်စွာ ဘုရားက လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)ကျော်ကပင် သိရှိတော်မူပြီး ‘ရူပံ ဘိက္ခဝေ အနတ္တ’ဟု ဟောကြားတော်မူသည့် တရားတော်နှင့် ယနေ့တွေ့ရှိချက်သည် လွန်စွာမှ ညီညွတ်နေပေတော့သည်။
၁၀- ပုရဇောတပစ်စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (3 of 5) pyidaungsu – unicode
(က-၁) ပုရေ=ရှေးဦးစှာ၊ ဇာတ=ဖွဈပျေါခွငျး၊ ပစ်စယ=အကွောငျးတရား။ ရှေးဦးကွိုတငျဖွဈပျေါသညျ့ အကွောငျးတရား။ Prenascence – condition တနညျး Born earlier.
(က-၂) အကွောငျးတရားမြားက အကြိုးတရားမဖွဈပျေါခငျ ရှကေ့ဖွဈနှငျ့သညျ့ ပုရဇောတပစ်စညျး။ (ပစ်စယနိဒ်ဒသေ ပါဠိတျော ပုရဇောတ နှာ-၁၄၉၊ ပဥှာဝါရ နှာ-၇၇ ကိုလညျး ကွညျ့ပါ။)
Prenascence – condition တနညျး Born earlier.
(က-၃) အကြိုးတရားက အကွောငျးတရားမဖွဈခငျ ရှကေ့ဖွဈနှငျ့သညျ့ ပစ်ဆာဇာတပစ်စညျး။ (ပစ်စယနိဒ်ဒသေ ပါဠိတျော ပုရဇောတ နှာ-၁၅၂၊ ပဥှာဝါရ နှာ-၈၁ ကိုလညျး ကွညျ့ပါ။)
(က-၄) အကွောငျးတရားနှငျ့ အကြိုးတရား ပွိုငျတူဖွဈသညျ့ သဟဇာတပစ်စညျး။ (ပစ်စယနိဒ်ဒသေ ပါဠိတျော ပုရဇောတ နှာ-၁၄၂၊ ပဥှာဝါရ နှာ-၃၀ကိုလညျး ကွညျ့ပါ။)
Conascence- condition တနညျး Born together.
(က-၅) ပုရဇောတပစ်စညျးတှငျ ၁-ဝတ်ထုပုရဇောတနှငျ့ ၂-အာရမ်မဏပုရဇောတဟူ၍ နှဈမြိုးရှိပါသညျ။
(က-၆) ဝတ်ထုပုရဇောတကို လလေ့ာရာတှငျ ၁-စက်ခုဝတ်ထု၊ ၂-သောတဝတ်ထု၊ ၃-ဃာနဝတ်ထု၊ ၄-ဇိဝှါဝတ်ထု၊ ၅-ကာယဝတ်ထု၊ ၆-ဟဒယဝတ်ထုတို့ကို ဦးစှာ မှတျသားမိရနျ လိုပသေညျ။ (ပစ်စယနိဒသေပါဠိတျော ပုရဇောတ နှာ-၁၄၉ လညျးကွညျ့ပါ)
(က-၇) အာရမ်မဏပုရဇောတကို လရေ့ာတှငျ ၁-ရူပါရုံ အဆငျး၊ ၂-သဒ်ဒါရုံ အသံ၊ ၃-ဂန်ဓာရုံ အနံ့၊ ၄-ရသာရုံ အရသာ၊ ၅-ဖောဋ်ဌဗ်ဗာရုံ အထိအတှတေို့ကို ဦးစှာ မှတျသားမိရနျ လိုပသေညျ။ (ပစ်စယနိဒ်ဒသေပါဠိတျော ပုရဇောတကိုလညျးကွညျ့ပါ)
(က-၈) မွငျသိစိတျ စက်ခုဝိညာဏ ဖွဈပျေါလာနိုငျရနျ တညျရာမှီရာ (Base) အဖွဈ ကြေးဇူးပွုခွငျးကို ဝတ်ထု ပုရဇောတ။ မွငျသိစိတျ စက်ခုဝိညာဏ ဖွဈပျေါလာနိုငျရနျ အာရုံ (Object) အဖွဈ ကြေးဇူးပွုခွငျးကို အာရမ်မဏပုရဇောတ ဖွဈပါသညျ။ ကနျြသညျ့ နား၊ နှာခေါငျး၌ ကွားသိစိတျ နံသိစိတျတို့ကိုလညျး အလားတူ နားလညျရပါမညျ။
(ခ-၁) ဤတှငျ ဝတ်ထုပုရဇောတပစ်စညျး၏ ထူးခွားခကျြမှာ တညျရာမှီရာ Base က Born earlier ကွိုတငျဖွဈနှငျ့ပွီး ကြေးဇူးပွုသညျ (ဝါ) ဖွဈစသေညျ။ ဥပမာ- အဆငျးကိုမွငျရနျ စက်ခုဝတ်ထုကို အမှီပွုပွီး ဖွဈရသညျ။ အသံကို ကွားရနျ သောတဝတ်ထုကို အမှီပွုပွီး ဖွဈရသညျ။
( ခ-၂ ) ပဥှာဝါရ၌ ရူပါယတနံ စက်ခုဝိညာဏဿ ပုရဇောတပစ်စယနေ ပစ်စယောဟုလညျးကောငျး ပစ်စယနိဒ်ဒသေ ပါဠိတျော၌ “စက်ခာယတနံ စက်ခုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမ်ပယုတ်တကာနဉ်စ ဓမ်မာနံ ပုရဇောတ-ပစ်စယနေ ပစ်စယော”ဟု လာရှိပါသညျ။ စက်ခုပသာဒ (ဝါ) စက်ခုဝတ်ထုသညျ စက်ခု ဝိညာဏဓာတျ (မွငျသိစိတျ)ကို ပုရဇောတပစ်စညျးဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
(ခ-၃ ) မကျြစိအကွညျ စက်ခုပသာဒ (ဝါ) စက်ခုဝတ်ထုသညျ ရုပျသကျ၊ နာမျသကျမြား၏ သဘာဝနိယာမအတိုငျး ဥပါဒျ၊ ဋ်ဌီ၊ ဘငျ Process ထဲမှ ဖွဈ တညျ ပကျြ၍၊ ဖွဈ တညျ ပကျြ၍ သှားနပေါသညျ။ ဤတှငျ Born earlier တငျကွို၍ ဖွဈရသညျဟု ဆိုရာ၌ မိမိတို့သိမှတျနိုငျသညျ့ အခြိနျကာလအားဖွငျ့ နှဈ၊ လ၊ ရကျ၊ နာရီ မညျမြှ တငျကွို ဖွဈရသနညျး ဟူသောမေးခှနျး ပျေါပေါကျလာပါသညျ။
(ဂ-၁) Everything change, Nothing remain without change. ဟူသော မွတျဗုဒ်ဓ၏ အဆုံးအမအတိုငျး မွဈရမြေား မနားတမျး တဈသှငျသှငျ စီးဆငျးနသေကဲ့သို့ ရုပျဓမ်မ နာမျဓမ်မအစဉျသညျလညျး မနားတမျး ဖွဈပကျြ ပွောငျးလဲ ၍ နပေါသညျ။
(ဂ-၂) ဤမြှ သကျတမျးတိုတောငျးသော ရုပျတရားမြားထဲမှ မညျသညျ့ စက်ခုဝတ်ထု= စက်ခုပသာဒရုပျက မွငျသိစိတျကို ရှမှေ့ ကွိုတငျဖွဈကာ ကြေးဇူးပွုမညျနညျး။
(ဂ-၃) သက်ေခတြောငျဆရာတျောဦးတိလောက ပွုစုတျောမူခဲ့သညျ့ ကမျြးစာအုပျတှငျ ရုပျကလာပျမြား ဖွဈတညျ နမှေုကို အလှနျတိကစြှာဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ “အခွခေံရုပျကလာပျကို ပရမတ်တရုပျကလာပျ”ဟု မှတျကွ၊ ပရမတျရုပျ ကလာပျမညျသညျကား တဈပါးကိုတဈပါး မမှီတှယျရဘဲ မဖွဈနိုငျကွ၊ မတညျနိုငျကွ၊ ထိုသို့ မဖွဈနိုငျ၊ မတညျနိုငျကွသောကွောငျ့ ဘယျရုပျက အောကျက၊ ဘယျရုပျက အထကျက၊ ဘယျရုပျက လကျဝဲ၊ ဘယျရုပျကလကျယာ၊ ဘယျရုပျက အတှငျး၊ ဘယျရုပျက အပွငျကဟု ရှေးခယျြမရဘဲ တဈခုတညျး ဖွဈနကွေ၏။ ထို့ကွောငျ့ တဈခုစီကှဲသှားအောငျ ခှဲခွား၍မရသော အဝိနိဗ်ဘောဂရုပျမြားအဖွဈ စုစညျး နကွေ၏။ ထိုရုပျမြားသညျ သဟဇာတသဘောဖွငျ့ အကုနျလုံး အတူတကှ တပွိုငျတညျးဖွဈပျေါလာ၍ ပကျြလြှငျလညျး အကုနျလုံး အတူတကှ တပွိုငျတညျး ပကျြကွလေ၏။ မွဓောတျလှနျကဲသော ပရမတ်တ ရုပျကလာပျပေါငျး သိနျး၊ သနျး၊ ကုဋလေောကျ သမူဟကလာပျမြား ပေါငျးစုဖှဲ့ကွလြှငျ ပရမာဏုမွူ ဖွဈလာ ၏။ ထိုပရမာဏုမွူ၏ အထညျပမာဏ အရှယျအစားကို ဤသို့သိရမညျ”
(ဂ-၄) “ဦးခေါငျးက သနျးတဈကောငျကို ခုနှဈစိတျစိတျသျော တဈစိတျစာသညျ လိက်ခာမညျသော ပိုးတဈ ကောငျနှငျ့ ညီမြှသညျ” (ထိုလိက်ခာပိုးသညျ ဝဲနာ၊ ယားနာ ဖွဈစသေောပိုးဖွဈကွောငျး ယနေ့ ဆေးသိပ်ပံက အတညျပွုကွပါသညျ။)
“အနုမွူ Atom တဈလုံးကို ၃၆-စိတျစိတျသျော တဈစိတျသညျ ပရမာဏုမွူ Partical တဈခုနှငျ့ ညီမြှ၏”
ထို့ကွောငျ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၏ အဘိဓမ်မာတရားတျောအရ အနုမွူ ဗအသာ တဈလုံးတှငျ ပရမာဏုမွူ Partical ၃၆-မြိုးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားကွောငျး နားလညျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
(ဂ-၅) ယခုအခါ သိပ်ပံပညာရှငျမြားကရုပျ Matter ကို အထပျထပျခှဲခွမျးစိတျဖွာကာ လလေ့ာသောအခါရုပျ၌ အနှဈ အဆံ တဈစုံတဈရာမှ မတှရှေိ့တော့ဘဲ စှမျးအငျ Energy အဖွဈသာ ရှိကွောငျး ဖျောပွကွပါသညျ။ ထိုစှမျးအငျ Energy မြှသာရှိသော သဘောတရားတှငျ ရုပျတဈခု၌ ရှိသငျ့ရှိထိုကျသညျ့ Weight အလေးခြိနျ၊ Mass ဒွပျထု သဘော၊ Form အဆငျးသဏ်ဍာနျ၊ Dimension အရှယျအစားပမာဏတို့ မရှိကွောငျးကို ယနေ့ ရူပဗဒေ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက တှရှေိ့လာပါသညျ။
(ဂ-၆) ဤတှရှေိ့ခကျြက ရုပျတှငျ ထာဝရတညျမွဲသညျ့ အထညျဒွပျမရှိတော့ကွောငျး သကျသထေူပါသညျ။ မွတျစှာ ဘုရားက လှနျခဲ့သညျ့ နှဈပေါငျး (၂၅၀၀)ကြျောကပငျ သိရှိတျောမူပွီး ‘ရူပံ ဘိက်ခဝေ အနတ်တ’ဟု ဟောကွားတျောမူသညျ့ တရားတျောနှငျ့ ယနတှေ့ရှေိ့ခကျြသညျ လှနျစှာမှ ညီညှတျနပေတေော့သညျ။